DHEGEYSO-Musharax Cali Maxamed Geeddi oo kahadlay musuq maasuqa kajira dalka. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Musharax Cali Maxamed Geeddi oo kahadlay musuq maasuqa kajira dalka.
Diseembar 18, 2016 9:18 g 0
Muqdisho, Dec 19 2016–Ra’iisul wasaarihii xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee AUN Madaxweyne Cabdullaahi Yuusufu Axmed, Pro Cali Maxamed Geeddi ahna musharax madaxweyne ayaa kahadlay arrimaha musuq maasuqa kajira dalka.
Pro Cali Maxamed Geeddi, oo lahadlay Daljir ayaa waxa uu kudheeraaday musuq maasuqa hareeyey dowladda hadda jidha iyo sida uu wax uga qaban doono haddii uu ku guulaysto xilka madaxweynaha ee Soomaaliya.
SAWIRRO-Roobab ka curtay qaybo kamid ah gobolada Bari iyo Karkaar ee Puntland.